अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस - प्रगतिका लागि दवाव| Nepal Pati
प्रगतिका लागि दवाव
सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस
विश्वभर मार्च ८ मा १०८ औ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस “प्रगतिका लागि दवाव” (press for progress) भन्ने नाराका साथ मनाइदैछ । महिला दिवस मनाउनुको उदेश्य मुलतः समाजमा देखिएको लैगिक बिभेदको अन्त्य गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनु हो । यसका लागि, पारिवारिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनितिक क्षेत्रमा महिलाकोे भुमिका बराबरी हुनुपर्नै कुरा नै हाम्रा मुल मुद्धा हुन, जुन अझै सम्म पनि पुर्ण रुपमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैनन् । हिजो परिवार भित्रको चौघेरो नाध्न नसकिरहेका महिलाहरु आज भिन्नै स्थान बनाउन सफल भएका छन, यसका पछाडि संसार भरिका महिलाहरुको संघर्षको लामो इतिहास छ ।
आज भन्दा एक सय सात बर्ष पहिले शुरु भएको यसको इतिहासको आफ्नै महत्व रहेको छ । यो पर्व श्रमिक महिलाको सघर्षशिल इतिहाससंग जोडिएको छ । वर्गीय सत्ता मार्फत् व्यक्त हुने पुरुष सत्ताका सम्पूर्ण दमन, उत्पीडन, हैकम तथा पारिवारिक दासताले थोपरेका सवै प्रकारका श्रम शोषण बिरुद्ध परि लक्षित छ । महिला एकताको प्रतिकको रुपमा स्थापित यो दिन नेपाली महिलाहरुको पनि एक चाड हो ।
युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भएपछि ठुला उद्योगको स्थापनाको लहर आयो । यसले साना उद्योग र हाते तानबाट कपडा बुन्ने, घरेलु उद्योग अन्त्य गर्यो । ठुलो मात्रामा बस्तु उत्पादन गर्ने र बेच्ने परम्पराको थालनी भयो । आफ्नै कुटीर उद्योगको कमाइमा बाँचेका स्वरोजगार श्रमिकहरु विस्थापित बन्न पुगे । अब मजदुरहरु कारखानामा काम गर्न थाले । यो कुरा अठारौं र उन्नाइसौ शताब्दितिरको कुरा हो । मजदुरहरुको श्रमको शोषणबाट नै पुजीपतिहरु मोटाउन थाले । श्रमिकहरु भने १६ घण्टासम्मको कठोर श्रममा जोतिन बाध्य थिए । कम पारिश्रमिक पाउने कुराले उनीहरुको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनिय बन्दै गयो । श्रमिकहरुको सम्पुर्ण जीवन पुजिपतिको इच्छामा भर पर्दथ्यो । थोरै तल माथि भयो कि कामबाट निकालिनु पर्ने अवस्था आउथ्यो, जहाँ हक र अधिकारका विषय धेरै टाढाका कुरा थिए । प्रथम र दोस्रो बिश्व युद्धले विश्वका धेरै युवाहरु विनास ग¥यो । कतिपय देशका त गाउँका गाउँ नै युवा बिहिन बन्न पुगे । कारखानामा काम गर्ने युवा शक्तिको अभावले र आर्थिक मन्दीका कारण अब महिलाहरु पनि कारखानामा काम गर्न परिचातिल हुन थाले । महिलाको काम घरभित्र र बच्चा जन्माउने मात्र हो भन्ने सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन हुन थाल्यो । पुजिँबादको बिकासले महिलाहरुलाई घरको चौघेराबाट कारखानामा प्रवेश गरायो । अव महिला पनि कारखानाका मजदुर बने तर महिला र पुरुषका वीच संगै र एउटै कामकावीच पनि ठुलो भिन्नता थियो । श्रमको लुटमा विकशित भएको पुजिवादले लैंगिक विभेद मार्फत् झनै ठूलो उत्पीडन र श्रम शोषण गर्न थाल्यो । मानवीयताको कदर हुन सकेन । यही भिन्नतालाई तोड्नका लागि महिलाहरु पनि मजदुर संगठनमा सामेल हुन थाले । सन १७८९मा सर्व प्रथम पेरिसका महिलाहरुले महगी बिरुद प्रदर्शन गरे ।
सन १८३२मा हल्याण्डका महिलाले असमान ब्यबहार र असमान तलव–भत्ताको बिरोधमा आन्दोलनमा उत्रिए ।
सन १८३५ मा बोस्टनका महिलाले १४ घण्टाको कामको बिरोध गर्दै कामको अवधि बढीमा १०घण्टा हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिए
सन १८४८मा अमेरिकाका महिलाले समान अधिकार, पुरुषद्वारा गरिने शोषणको अन्त्य, पढ्न र कमाउन पाउनु पर्ने कुराको माग राखेर आन्दोलन गरे जुन आन्दोलनले घोषणा पत्र तयार ग¥यो ।
सन १८५७ मार्च ८का दिन कामको समय ८ घण्टा निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै अमेरिकाको न्युयोर्कमा श्रमिक महिलाले प्रर्दशन गरे ।
सन् १९०७मा जर्मनको स्टुटगार्टमा महिलाहरुको पहिलो सम्मेलन भयो । यो समम्मेलनले महिला नेतृ क्लारा जेटकिनलाई महासचिव चयन ग¥यो । त्यस पश्चात अन्तर्राष्टिय महिला आन्दोलन अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढ्यो ।
सन १९०८को मार्च ८मा महिलाहरुले मताधिकारको माग गर्दै प्रर्दशन गरे ।
महिलाहरुले उठाइरहेका मुद्दामा राज्य पक्षले बिषेश चासो देखाएन भने ती कुरा जति सुकै जायज भएपनि पछाडि नै पर्दछन । युरोपमा भएको औद्योगिक क्राान्तिले महिलालाई कारखानासम्म त पु¥यायो तर शोषणबाट भने मुक्ति दिन सकेन । महिलाहरुले बिभिन्न क्षेत्रमा गरिरेहका विरोध प्रदर्शनले समाजलाई एकखालको दवाब त दिएकै थिए तर संस्थागत तवरबाट महिलाको पक्षमा अधिकार स्थापित भने हुन सकिरहेको अवस्था थिएन ।
सन १९४५मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो । यसले आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन थाल्यो । यसै क्रममा यसको एक अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले संसारभरिका महिलाको अवस्था मापन गर्न एक महिला आयोग स्थापना ग¥यो जसलाइ Comission on the Status of women भनियो । यसै संस्थाको पहलमा पहिलो विश्व महिला सम्मेलन मेक्सिकोमा भयो । यो सम्मेलन महिलाको समानता, विकास र शान्तिका विषयमा लक्षित थियो । सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुले महिला विकास र समानताको सिद्घान्तलाई ब्यावहारिक रुपमा अवलम्वन गर्दै अगाडि बढे । आज चारवटा विश्व महिला सम्मेलन सम्पन भैसकेका छन । यहाँ सम्म आइपुग्दा महिलाका सरोकारका विषयहरुले पनि फराकिलो क्षेत्र बनाएका छन् ।
नेपालमा यसको प्रभाव विश्वमा भएका आन्दोलन र सम्मेलनहरुले नेपाली महिलाहरुलाई पनि जागरुक बनाउन थाले । २००४ सालमा नेपाल महिला संघ र २००८ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । अब संगठित रुपबाट नेपालमा पनि महिलाका हक अधिकारको खोजी गर्न थालियो । २००७ को प्रजातन्त्रपछि महिलाहरुबाट नारी शिक्षा र बहुबिबाह, बालबिबाहको अन्त्य, नारी समानताका नाराहरु अगाडि ल्याइयो । थोरै संख्यामा भएपनि छोरीहरु डाक्टर, इन्जिनियर बन्न थाले । महिला संगठनहरुले आ–आफना कार्यक्रमहरुलाई सशक्त ढंगले देशभरि फैलाउन थाले । २०१७ सालमा बहुदलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि महिला अधिकारको आन्दोलन पनि स्वभावतः पछाडि प¥यो ।
पंचायती समय भर महिलाहरुले आफ्ना मागहरुलाई ८मार्चकै दिनमा खुलारुपमा बाहिर ल्याउन थाले । यसो गरिरहँदा कति महिलाहरुलाई जेल हाल्ने र यातना दिने सम्मको काम पंचायती शासकहरुले गरे । पंचायतकालामा एक हिसावले यो ८ मार्च नेपाली महिलारुको अधिकार स्थापित गर्ने संघर्षको कोशे ढुँगा जस्तै बन्यो । वि.सं.२०४६ सालको परिर्वतनले महिलाको अवस्थामा धेरै परिर्वतन ल्यायो । शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सेना– प्रहरी, निजामति क्षेत्र लगायत सवै क्षेत्रमा महिलाहरुको रोजगारीको पहँुच पुग्न थाल्यो । महिलाहरुको राजनितिमा ब्यापक सहभागिता बढ्यो भने अर्को तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्म्ोलनहरुले पारित गरेका घोषणा, रणनीतिहरु र सन्धि–महासन्धिहरुको अनुमोदन नेपालले गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि योजनाहरु निर्माण भएता पनि ब्यबहारिक कार्यान्वयनमा भने दवाव र अनुगमनको आवश्यकता जरुरी छ ।
वि.सं. २०६२/६३को जनआन्दोलनले महिलाहरुका अधिकारलाई अझ ब्यापक र संस्थागत बनाएको छ । घरभित्र सीमित पारिएका महिलाहरु रोजगारीको खोजीमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुग्न सफल भएका छन् । दोस्रो जन आन्दोलनले हाम्रो समाजको पुरानो संरचनालाई परिर्वतन गरेको छ । राज्य अब नया सिराबाट अगाडि बढने क्रममा छ । नयाँ सबिधानले दिएका महिलाका हक अधिकारहरु विस्तारै लागू हुदै छन । अहिलेको स्थानीय निकायमा भएको निर्वाचनको परिणमले महिलाहरुलाई घरको चौघेराबाट अझै अगाडि बढाएको छ । वर्तमान संविधानमा महिलाका पक्षमा यी केही राम्रा कुराहरु लेखिएका छन, जसलाई नेपाली महिलाहरुले संघर्षको उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् ।
नेपाली महिला आन्दोलनका उपलब्धि
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यबस्था भएको छ ।
सम्पत्तिमा समान पहँुच र नियन्त्रणको ब्यवस्था गरेको छ ।
हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको लागि राज्यका सवै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक आधारमा गर्ने व्यबस्था भएको छ ।
राज्यका सवै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष , सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा ब्यबस्था गरिएको छ ।
शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा महिलालाई बिषेश प्राथमिकता दिइएको छ ।
बर्तमान अवस्थामा राज्यका महत्वपुर्ण पदहरुमा महिलाकै उपस्थितीले हेर्दा लाग्छ– देश महिलामय भएको छ । पेशा–ब्यवसाय, राजनितिदेखि न्यायिक क्षेत्रसम्म महिलाकै सम्मानजनक उपस्थिती देखिँदैछ भने अर्कोतर्फ बाटो–घाटो, स्कुल–कलेज र कार्य स्थल महिलाका लागि झनै बढी असुरक्षित बन्दै गएको अवस्था पनि छ । महिलाहरु परिर्वतनतर्फ जति उन्मुख बन्दै छन, जति क्रियाशिलता उनीहरुको बढदैछ त्यति नै उनीहरु असुरक्षित बन्दै गएको अवस्था छ । दिनदिनै हत्या–हिंसा र बलात्कारका घटना यसका प्रत्यक्ष उदाहरुण हुन् । समाज पुजिवादी भएको छ । यसबाट महिलाहरु झन् बढी बजारका उपभोग्य वस्तु र विज्ञापनका साधन बन्दैछन । यी सबै परिस्थतीबाट माथि उठ्नका लागि महिलाहरु अझ सशक्त, सक्षम, योग्य र जिम्मेबार बन्न जरुरी छ ।
नयां परिवेश र नेपाली महिला आन्दोलनकारीहरुको जिम्मेवारी
हाम्रो देश अहिले नयाँ युगमा प्रवेस गरिरहेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत बिकास भएको छ । स्थानीय, केन्द्र र प्रदेशका निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनु महिला आन्दोलनका लागि थप अनुकूलता सिर्जना हुनु हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
अब कानुनमा लेखिएका कुरा ब्यवारमै लागू गराउने काममा दबाब दिने र त्यस बाहेक अरु कुरा प्राप्तिका निमित्त महिलाको दवाव फेरी पनि जरुरी देखिदैछ । कुनैपनि प्रान्तमा महिला मुख्य मन्त्री बनाउने कुरामा सत्ताधारी दलको तर्फबाट ध्यान गएको देखिएन । यो देशको राष्ट्रपति र सभामुख बन्न सक्ने खुवी महिलामा छ भने प्रदेशको मुख्य मन्त्री बन्ने क्षमता पनि पक्कै थियो ? यो सोचनीय बिषय बनेको छ । यसले देखाउदैछ की हरेक क्षेत्रमा हाम्रो प्रगतिका लागि दवाव सृजना गर्न अझै जरुरी छ । पार्टीका नेताहरु भन्दैछन्– अव हाम्रा राजनितिक मुद्घाहरु सकिएका छन । अब देशलाई आर्थिक समृद्घितर्फ अगाडि बढाउनु पर्दछ । अहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचनले देखाउदैछ कि महिलाको दवाममुलक आन्देलन अगाडि बढेन भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्नेछन् । यो देशको बिकास र समृद्घिमा हाम्रो पनि प्रभावकारी भूमिका रहनु पर्दछ । आफ्नो प्रगतिका निम्ति सवै क्षेत्रमा आफैले हस्तक्षेपकारी भुमिकाका लागि अग्रसर बनौं । सबै आमा–दिदी–बहिनी र छोरीहरुमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र दुब्र्यवहारका विरुद्घ अगाडि बढ्ने उत्साह मिलोस् ।सबैमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस को हार्दिक शुभकामना ।
भण्डारीद्वारा राष्ट्रपतिमा उम्मेदावारी दर्ता